Vhidhiyo yazvino kubva kuApple Park inotiratidza mashandiro anoita basa husiku | Ndinobva mac
Vhidhiyo yazvino kubva kuApple Park inotiratidza mashandiro anoita basa husiku
Pakupera kwemwedzi uno, vakomana vanobva kuCupertino vachatanga kuenda kunzvimbo nyowani kuApple Park, danho rinotora mwedzi ingangosvika mitanhatu kuti ripere, nepo mabasa ese ari kuitwa nhasi muzvivakwa zvitsva ari zvivakwa. Iwo mabasa anoenderera mberi nekufamba nhanho yakanaka, asi zvichipesana newachi yekupa kwekupedzisira kubata kumuzinda mutsva, zvese mukati nekunze. Nhasi tinokuratidza imwe vhidhiyo nyowani matinogona kuona mamiriro azvino emabasa uye sei mabasa anoenderera mberi achiitwa husiku, pasina kumira chero nguva.
Chiri kunyanya kushamisa nezvekupoteredzwa kwenzvimbo nyowani kushayikwa kwemavara, huswa hwakakwanisa kusiya dunhu rese reCalifornia neOregon isina miti. Apple inoronga kudyara zviuru zvitatu zvemiti, asi parizvino avo vari kutarisira gadheni vakakwanisa kuita nezvidimbu zvinopfuura chiuru zviyuniti, zvikamu zviri munzvimbo inosvika zviuru gumi zvemamirimita padyo nenzvimbo nyowani dzeApple.
Mune ino vhidhiyo yekupedzisira tinogona kuwana zano rekuti kuvhenekerwa kweizvi zvivakwa nyowani, zvese zvekunze nekuvhenekera kwemukati kwenzvimbo yakavharwa, asi kana tichifunga kuti mabasa haasati apera, pfungwa inomiririra chete. Isu tinogona zvakare kuona mamiriro enzvimbo yekupaka yakachengeterwa vashandi, nzvimbo inotora chikamu chakakosha kwazvo pazvivakwa zvekunze zvekuomarara. Kubva muna Kukadzi apfuura, tinoziva kuti iyi Campus nyowani ichatumidzwa Apple Park uye kuti horo yevaipinda chiuru vachabhabhatidzwa pasi pezita Steve Jobs. Kana iwe uchida kuona kuti mabasa afambira mberi sei nhasi, ini ndinokukoka iwe kuti utarise ino vhidhiyo yazvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Vhidhiyo yazvino kubva kuApple Park inotiratidza mashandiro anoita basa husiku
Apple Inosvitsa Apple Tarisa NikeLab, Yekusarudzika Apple Tarisa Bhandi
Apple inovimbisa kumisa kuchera pasi uye kukurudzira zvigadzirwa zvekare